Isiqinisekiso Sokuphumelela: Hlangana neQembu; Bheka Amacala amaklayenti kanye neKlayenti lobufakazi
Amaqiniso Omnandi Mayelana neSemalt
Njengengelosi yokugada yamabhizinisi amakhulu namancane ngokufanayo, izinkampani, izisebenzi ezizimele, osomabhizinisi nezinye izidumbu eziningi ezinobudlelwano online. I-Semalt yi-ejensi yedijithali ekusiza ukuthi ufinyelele lokho ongeke ukwazi wedwa nesiqinisekiso sokweneliseka lapho impumelelo yebhizinisi lakho iphathelene.
I-Semalt inikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezisukela ekubalulekeni kwe-SEO kwe-AutoSEO ne-FullSEO kuya kuma-analytics eWeb, ukuthuthukiswa kweWeb, kanye nokukhiqizwa kwevidiyo. I-Semalt inikezela ngosizo olufanele ebhizinisini lakho futhi ikunikeza isiqinisekiso sokuphumelela kwe-100% ngaphandle kwengcindezi.
I-Semalt yi-ejensi yedijithali enobukhona bomhlaba wonke esebenza nethimba eliqinisekisiwe nelinamandla kuzo zonke izindawo kanye nezinhlaka zokuqamba iwebhu, ukuthuthukisa iwebhu, ukumaketha namanye amathuluzi ahlobene namabhizinisi online. Ngamathuluzi anjenge-SEO-AutoSEO ne-FullSEO, iWeb Analytics, njll. Baqinisekisa ukuthi konke amabhizinisi nabaninimabhizinisi abakudingayo konke kunakekelwa ngendlela efanele.
Ingabe ibhizinisi lakho likule ndawo eqinile noma lihlushwa ukuthwala okuphezulu kwewebhusayithi nabavakashi? Ingabe unayo imincintiswano eqinile ekuvimbe ekufinyeleleni amazinga aphezulu ku-Google? Bese ungesabi, iqhawe lakho Semalt lilapha ukuzokusindisa kanye nebhizinisi lakho!
I-Semalt iyi-ejensi ekhangayo ye-SEO kanye ne-ejensi yokuthengisa ekuhlinzeka ngezinsizakalo eziqinisekisiwe zokususa izinkinga zakho zebhizinisi ezesabekayo nezifanele kakhulu zokuthengisa. Kwenza lokhu ngenqwaba yazo engapheli yezingcweti eziqinisekisiwe nezizinikele ezibeka ukuphumelela kwebhizinisi lakho ngaphezu kwakho konke okunye futhi kuthatha ibhizinisi lakho ezingeni eliphakeme.
NgoSemalt, uzosizakala kakhulu ngochwepheshe bawo abanamakhono atholakalayo ukusiza unyaka wonke. Le nkampani inezinga eliphakeme kakhulu lokuthenjwa kwamakhasimende njengoba irekhodi le-ejensi lamaphrojekthi aqediwe lishisa uphahla ngamaphrojekthi angaphezu kuka-800,000 nabasebenzisi abangama-300,000.
I-Semalt inikeza izinsizakalo zekhwalithi engenakubalwa ngamanani anengqondo futhi angabizi futhi ungakhohlwa izaphulelo zokumangaza ngaso sonke isikhathi sokufaka ukumamatheka okuningi ebusweni bakho.
Lokhu nezinye izinzuzo eziningi ongema ukuzithola lapho ukhetha uSemalt. Ezinye zalezi zinsizakalo zifaka:
USemalt ugxile ekuhlinzekeni ngezinsizakalo ze-SEO nezinsizakalo zokuthengisa ze-AutoSEO, i-FullSEO, i-Web Analytics, ukukhiqizwa kwevidiyo, kanye nokuthuthukiswa kwewebhu.
Yini i-SEO - Injini Yokucinga noma i-SEO njengoba ibizwa ngokuvame ukubizwa ngokuthi isu lokuthengisa iwebhusayithi elibandakanya inqubo yokwandisa ubungako kanye nekhwalithi yethrafikhi yanoma iyiphi iwebhusayithi. Kwenza lokhu ngokwandisa ukubonakala kwewebhusayithi kubasebenzisi ngenjini yokusesha.
Kuyinqubo yokuthola ithrafikhi esebenzayo yewebhusayithi ebhekisiwe ngokusebenzisa amagama angukhiye ahlosiwe ahlobene newebhusayithi ukukhulisa isikhundla sayo enjini yokucinga.
Isu lobuchwepheshe le-SEO likaSemalt lifaka amagatsha amabili wesevisi ye-AutoSEO ne-FullSEO:
I-AutoSEO - I-AutoSEO yakwaSemalt eyamabhizinisi aqala ukwazi izimangaliso ze-SEO nomthelela wazo ekuthengisweni.
Nge-AutoSEO, amabhizinisi asanda kwethulwa angenza ngcono amawebhusayithi awo, athuthukise ukubonakala kwewebhusayithi, ahehe izivakashi ezintsha futhi akhuphule ubukhona bebhizinisi online.
I-FullSEO- Semalt inikeza i-FullSEO kubavoti ekusebenzeni kwecebo le-SEO. Kungenxa yamabhizinisi ahlole i-SEO futhi afisa ukuya phambili futhi azuze okuningi njenge-ROI enhle nezuzisa inzuzo, ukutshala imali esizayo emakethe, ajabulele imiphumela yesikhathi eside futhi andise nesizinda sawo se-SEO.
Yini i-Website Analytics: leli isu lokumaketha elibandakanya iqoqo lezinqubo eziyinkimbinkimbi zokuqoqa, ukubika, nokuhlaziya idatha yewebhusayithi. Okuyilapho kusetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene zokufinyelela iwebhusayithi ukuthola isilinganiso sempumelelo noma ukwehluleka kwezinhloso zewebhusayithi. Ibuye isetshenziselwe ukuthola, futhi yakhe amasu wokuqinisekisa izinga lokuthuthuka.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi eSemalt kuhluke ngokuphelele kumisebenzi emaphakathi oyibona kwenye indawo. Ukuhlaziywa kwewebhusayithi yeSemalt kusiza ibhizinisi lakho ukuthi liqonde yonke into ngemakethe yayo yemakethe, ngokuqapha okuningiliziwe kwemakethe okuhlanganisa ukuqapha kwewebhusayithi yakho, isikhundla somqhudelani wakho, njll.
Kuyasiza namabhizinisi ukuthola izimakethe ezintsha nezitholakalayo kanye nezinhle zebhizinisi. Ngaphezu kwalokho, insizakalo futhi ifaka phakathi ukubasiza ukuba baguqule yonke imibhalo edingekayo nedatha ephathelene nebhizinisi ibe yi-PDF ne-Excel.
Amanani On Semalt
Kumasevisi amaningi kangaka, kungenzeka ukuthi ulindele ukukhuphuka ngaphezulu nangaphezulu kwamanani entengo aphezulu angakunciphisa ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, izinsizakalo zeSemalt zingabizi kakhulu kubantu abaningi noma amabhizinisi.
Zonke izinsizakalo zeSemalt ziza nezintengo ezihlinzeka ngamakhasimende eziyifanele ngempela insizakalo futhi futhi zikusiza ukugcina ephaketheni lakho lingenamuntu. I-Semalt futhi inikezela ngezaphulelo eziningana kokunye kwensiza yabo ngezikhathi ezithile kuya kwiklayenti layo. Hlola izithombe ezingezansi ukubona ezinye izaphulelo ezitholakalayo.
Uhlu lwamanani ezinsizakalo zeSemalt
ISemalt ihluke ngokuphelele kuma-ejensi amaningi zedijithali laphaya. Kuyinkampani ezinikele futhi ebucayi, i-Full-stack Digital Agency enganikeli nje kuphela ikhwalithi ngaso sonke isikhathi kepha futhi ikunikeza isiqinisekiso ngaphambili kwempumelelo ezayo.
Ukufakazela izinga layo lokuzibophezela nokuba semthethweni, awugcini ngokuhlangana nethimba leSemalt kuwebhusayithi, kepha uthola futhi ukubona amacala amaklayenti afakazela izinga lawo lempumelelo ngayo yonke indlela.
Hlangana neQembu LeSemalt futhi wazi ukuthi Basebenza kanjani.
Ngokufinyelela kwabo emhlabeni wonke, uSemalt uqhosha ngempumelelo emikhakheni eminingi enamacala amaklayenti amaningi aphumelele. Lobu bufakazi bukhona ukuze amanye amabhizinisi adlule kuwo ngenkathi elindele ukuthi ibhizinisi labo liphumelele lizoboniswa kuwebhusayithi yeSemalt.
Amanye amacala amakhulu weklayenti anezindaba ezinhle zempumelelo aboniswa ngezansi njengoba kubonwa kuwebhusayithi.
ISemalt ayinayo imikhawulo ye-niche, futhi ayinayo imikhawulo yolimi. Izinsizakalo zalo zitholakala kubo bonke abanentshisekelo kuwo wonke umhlaba. Zizwe ukhululekile ukubheka iwebhusayithi esemthethweni ye- Semalt yamacala amaklayenti aphumelele kakhulu ku-Semalt.com
Ngaphandle kwamacala amaklayenti abonisa ukwenyuka kwamaphesenti amabhizinisi omgwaqo amabhizinisi abo ahlangabezana nawo ngemuva kokungenelela kusuka kuSemalt. Kukhona nobufakazi bamakhasimende obungenakubalwa namakhasimende abelana nezitatimende zabo ezisabekayo maqondana nezimangaliso uSemalt azenzile ebhizinisini labo.
Hhayi nje kuphela ukuthi ungathola ubufakazi bevidiyo obuvela kumakhasimende kuwebhusayithi yeSemalt, kepha uzobona ubufakazi obubhaliwe obunokubuyekezwa okukhulu okuvela ku-Google naku-Facebook kubasebenzisi ababhalisile bakwaSemalt emhlabeni wonke.
Ukusuka e-United States kuye eVietnam, e-Ireland, uSemalt akayazi mingcele. Okuwukuphela kokukhathazeka ukuletha ukwaneliseka kumakhasimende ayo amaningi nokubeka amabhizinisi abo phezulu ngezinsizakalo zawo eziqeqeshiwe.
Kunobufakazi obuningi kakhulu obungaqedwa kulo msebenzi owodwa. Ukubuka okuningi sicela uvakashele iwebhusayithi esemthethweni yeSemalt futhi ufunde mayelana nokubuyekezwa kwezinsizakalo zeSemalt kusuka kofakazi bezincwadi zokuqala.
Ngezansi kunobufakazi obubhaliwe obuzothola kuwebhusayithi yeSemalt:
Ukhathazekile ngendawo yakho futhi uzibuza ukuthi ngabe uSemalt angakwazi yini ukubhekana nokusebenzisana nelinye izwe, ungesabi kahle ukuthi uSemalt ukwazile ukusibekela, kungakhathalekile indawo yakho.
Abasebenzi bakwaSemalt bangamaphrofeshinali futhi bezilimi eziningi. Banekhono ekukhulumeni izilimi zaphesheya, njengesiNgisi, isiFulentshi, isiPhuthukezi, isiTurkey, isiNtaliyane njalonjalo. Ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngemigoqo yolimi lapho ubheka ukuqasha izinsizakalo zeSemalt zebhizinisi lakho noma iwebhusayithi.
Ubuwazi ukuthi uphawu lukaSemalt empeleni luwuFudu?
Ubuwazi ukuthi i-Turtle iwuphawu oluyigugu eSemalt hhayi nje njengophawu lwenhlangano kepha futhi njengoba le nhlangano inesilulwane sofudu okuthiwa nguTurbo esihlala kuwo wonke amahhovisi aseSemalt futhi sisebenza njengoRecruiting Interviewer eTurbo?
Hlangana neTurbo iFudu
Ngaphandle kwezinsizakalo ze-top-notch ezenziwa yile nhlangano; amacala amaningi amaklayenti aphumelele aphathwe yi-ejensi kanye nobufakazi obuningi beklayenti abavela kuwo wonke umhlaba abelana izindaba zabo zempumelelo noSemalt, kusekuningi kakhulu ngoSemalt.
I-Semalt njenge-ejensi ikholelwa emandleni okubloga futhi inebhulogi ekhuthele kakhulu yokuxhumana namakhasimende ayo nabasebenzisi.
I-Semalt Blog ikuwebhusayithi yayo, futhi inamathani amaningi okuthunyelwe kwebhulogi ahlobene namabhizinisi online, amathuluzi okukhangisa online kanye nezinye izinkambu ezihlobene. Lokhu okuthunyelwe kwebhulogi kubhalwe ngochwepheshe emkhakheni, abakulungele ukwabelana ngolwazi lwabo, futhi banikeze imininingwane egcwele ngezihloko ezahlukahlukene ezihlobene nokumaketha kwe-SEO.
Okunye kokuqukethwe kwebhulogi ozokuthola ku-The Semalt Blog kufaka phakathi:
I-SEO vs PPC - Yikuphi Ongayisebenzisa Ukuze Khulu Kakhulu?
Ungayakha kanjani Ikhasi Lebhizinisi le-Google futhi Uyixubhe?
Izindlela Zokuzama Nezamaqiniso Zokuhambisa Amawebhusayithi Ukucinga Izinjini | Semalt
Amathuluzi we-SEO wamahhala we-18 Wokuthuthukisa Izikhundla Zakho | Semalt
Yini eyenza i-Balanced Dofollow Backlink Profil?
Lezi ziningi ezinye zitholakala kalula kuwebhusayithi. Ukufunda lokhu okuthunyelwe kungakunika ukuqonda okujulile namasu amaningi okuthuthukisa ibhizinisi lakho.
Ungathola futhi Ukubonisana kwamahhala kwe-SEO kuwebhusayithi yeSemalt. Ukubonisana kusetshenziselwe ukusiza abasebenza ngesikhathi sokuqala, kanye namakhasimende amadala ukubona izingqinamba zawo ze-SEO futhi kuqinise ukusebenza kwebhizinisi lawo.
Ngalo, amaklayenti angaba nombono ongcono walokho akudingayo, nohlobo lwensizakalo okufanele bayithenge kwaSemalt.
Bonke abanikazi bamabhizinisi online, ama-freelancers, ama-webmasters kanye nabanye abantu emhlabeni wonke bafuna izixazululo zokukhulisa amawebhusayithi abo, iSemalt iyindlela okufanele uhambe ngayo. Banikezela amawebhusayithi enziwe kahle futhi asebenza kahle, ngokusebenzisa amathuluzi ahlukahlukene okuthengisa ukukhuthaza ukubonakala nokuzibandakanya. ISemalt iyinhlangano yokuthengisa ethengisa izitolo egcwele ngokugcwele enamakhasimende ayo njengabaluleke kakhulu, enempumelelo enkulu futhi iwina ukukhombisa yona.